संक्रमितको जम्मा संख्या ४०२ पुग्योः परिक्षण कति भए ?
> संक्रमितको जम्मा संख्या ४०२ पुग्योः परिक्षण कति भए ?
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १७:२५
काठमाडौं, ६ जेठ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज मंगलवार झापाका ९ जना, मोरङ र सुनसरीका एक/एक जना, सर्लाहीका २ जना, मनवानपुर र रामेछाप, सिन्धुली र लमजुङका एकएक जना कपिलवुस्तका चार र नवलपरासीका एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
थपिएका कोरोना संक्रमित १७ देखि ४२ वर्ष उमेरका छन् ।
यससँगै कुल संक्रमितको संख्या ४०२ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण ३६ जिल्लामा पुगेको छ ।
प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित प्रदेश ५ मा छन् । प्रदेश १ मा ५४, २ मा एक सय ३६, वागमतीमा २७ र गण्डकी प्रदेशमा चार जना छन् भने प्रदेश ५ मा एक सय ७६, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच जना छन् ।
सोमबार एकैदिन ८० जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । हालसम्म कोरोना संक्रमणको उपचारपछि ३७ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण देखिने जिल्ला ३६ पुगेका छन् ।
हालसम्म पीसीआर विधिबाट ३२ हजार ६०४ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ भने आररडीबाट ७४ हजारभन्दा ६४९ पुगेको छ । हालसम्म ४५७ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार २८० जनाको कोरोना पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको डा. देवकोटाले बताए । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको गोगंमा गरिएका पीसीआर परीक्षणको रिर्पोट आउन बाँकी रहेको छ ।